Inona no atao hoe perimenopause? Fambara sy fitsaboana - Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fialam-Boly Pets Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Lalao Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fiaraha-Monina Wellness Orinasa Community, Company Fahasalamana Vaovao, Wellness Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana >> Inona no atao hoe perimenopause?
Inona no atao hoe perimenopause?
Vehivavy maro no mihevitra ny fitsaharana ho menopause ho zavatra lalovana. mitsahatra amin'ny fananahana , na izany aza, dia toerana haleha, raha ny marina, fa tsy dia lavitra. Tonga any amin'ity toerana haleha ity ianao rehefa vitanao nandritra ny taona iray tsy nisy fadimbolana. Ny dingana miakatra mankany amin'io teboka io (fantatrao fa ilay misy fipoahana mafana, fiovan'ny toetr'andro ary fe-potoana mavesatra) dia antsoina hoe perimenopause, hoy i Leah Millheiser, MD , profesora mpanampy amin'ny klinika momba ny fiterahana sy ny aretim-behivavy ao amin'ny Stanford University.
Izany dia vokatry ny fiovaovan'ny tahan'ny estrogen ao amin'ny vatana. Ity tsy fitoviana ambony sy ambany ity dia mety hanimba ny vatan'ny vehivavy iray, hoy ny Dr. Millheiser.
Hanana hevitra tsara ianao fa ao anatin'ny vanim-potoana perimenopause satria milaza ny soritr'aretina. Rehefa perimenopausal ianao dia misy ny soritr'aretina mahazatra:
Tselatra mafana sy hatsembohana amin'ny alina (fantatra koa amin'ny hoe soritr'aretina vasomotor)
Fotoana tsy ara-dalàna
Fiovan'ny toe-po, fahatsapana fanahiana na fahaketrahana
Olana eo amin'ny tatavia / tsy azo ialana
Tsy fahitan-tory na fikorontanana amin'ny torimaso
Ny ankamaroan'ny vehivavy dia miaina farafaharatsiny farafaharatsiny amin'ireo soritr'aretina ireo, hoy ny Dr. Millheiser.
Ny fahasaroan'ny soritr'aretina dia hiovaova, ary mety hiovaova isam-bolana mihitsy aza, hoy izy. Iray volana, ohatra, mety hanana fe-potoana ara-dalàna tanteraka ianao. Ny manaraka, mety tsy hahatratra anao tanteraka ianao satria io firongatry ny estrogen io dia manakana anao tsy hihodina. Mandritra izany fotoana izany dia mitohy ny fananganana tranonjaza ataonao. Ny vokany? Ny vanim-potoana manaraka dia tena mavesatra.
Mandra-pahoviana perimenopause farany?
Ireo soritr'aretina menopausal mampihetsi-po ireo dia matetika manomboka maivana sy miadana, nefa mety hahatratra tampoka ihany koa izy ireo ary amin'ny fomba mahery vaika. Mety haharitra herintaona izy ireo, na mety haharitra dimy na 10 taona. 7.4 taona ny salan'isa, hoy izy Mary Jane Minkin, MD , profesora klinika ao amin'ny departemantan'ny fiterahana, gynéolojia ary siansa momba ny fiterahana ao amin'ny Yale University School of Medicine. Haharitra hafiriana izy ireo ianareo ? Mampalahelo fa tsy misy fomba haminavina ny valin'ity fanontaniana ity. Tena mila miandry fotsiny ianao, hoy ny dokotera Minkin.
Inona ny taona ara-dalàna amin'ny perimenopause?
Toy ny tsy azo atao ny maminavina ny faharetan'ny perimenopause dia somary mistery ihany koa ny fotoana hanombohan'ny perimenopause. Raha manodidina ny 40 taona ianao, ary miaina tselatra mafana sy fiovana amin'ny tsingerim-bolana, dia mety ho famantarana izany fa miova ny haavon'ny hormonina ary mandeha ny perimenopause. Na izany aza, mety hidika zavatra hafa koa izy io, noho izany dia te hiresaka amin'ny dokotera ianao mba hialana amin'ny olana ara-pahasalamana mila fitsaboana.
Afaka manome refy ve ny havan'ny vehivavy antitra rehefa hanomboka ny perimenopause ary haharitra hafiriana izy io? Indraindray, eny. [Afaka] miresaka amin'ny reninao sy ny nenitoanao ianao satria misy fironana ara-pianakaviana, hoy ny fanazavan'i Dr. Minkin.
Fantaro anefa fa izany no izy fotsiny refy. Ny dokotera dia tsy tena mahalala hoe firy ny anjara andraikitry ny fianakaviana satria tsy betsaka ny angona azo antoka momba an'io lohahevitra io, hoy ny Dr. Millheiser. Samy hafa amin'ny vehivavy rehetra, hoy izy.
Inona no taona ara-dalàna amin'ny fadimbolana?
Raha ny marina mahatratra menopause, ny salan'isan'ny taona dia 51, araka ny Fikambanana Menopause Amerikanina Avaratra —Fa ara-dalàna ho an'ny vehivavy ny manatona ny fadim-bolana amin'ny fotoana rehetra eo anelanelan'ny 40 sy 58. Amin'io fotoana io dia tsy mamoaka atody intsony ny atody atody ary tokony hioritra ireo hormona miovaova. Na dia misy aza ny vehivavy sasany miatrika tselatra mafana mandritra ny fadim-bolana, hoy ny Dr. Minkin.
Ahoana no hamaritana ny perimenopause?
Perimenopause dia dingana voajanahary tanteraka, ary ny diagnostika dia miorina amin'ny soritr'aretina, hoy ny fanazavan'i Dr. Millheiser. Tsy misy fitsapana hanamarinana ny perimenopause; fitsapana ihany no hialana amin'ny fepetra hafa izay manana soritr'aretina mitovy amin'izany. Ohatra, raha tsy azonao ny dokotera dia ny soritr'aretinao dia vokatry ny perimenopause, fitsapana fitondrana vohoka, fitsapana ra, Pap smear, ary / na sary dia azo baikoina hijerena ireo olana ara-pahasalamana vehivavy hafa toy ny fibroids utérine, homamiadan'ny ovarian, na toe-piainana tiroida sasany - indrindra raha eo amin'ny lafiny zandriny ianao.
Raha misy vehivavy manao jiro mafana na hatsembohana amin'ny alina ary eo amin'ny faramparan'ny faha-40 taonany dia hoy aho hoe misy vintana tsara mety hijerena azy, hoy i Dr. Millheiser. Fa raha eo am-piandohan'ny faha-40 taonanao ianao ary miaina ireo soritr'aretina ireo mitokana, dia azonao atao ny manamarina ireo toe-javatra hafa.
Ny zavatra tsara indrindra mety hataon'ny vehivavy manakaiky ny taonan'ny perimenopause, hoy ny Dr. Millheiser, dia ny mianatra fotsiny mamantatra ny soritr'aretin'ny perimenopause mba hahafahany miatrika izany. Misy ny fitsaboana ary azo tantanana ireo soritr'aretina.
Zava-dehibe tokoa ny fiomanana amin'ny fahalalana, hoy izy, nanazava fa vehivavy maro no mandany taona maro amin'ny fijaliana amin'ny soritr'aretin'ny perimenopause satria tsy tsapany tsara izay mitranga. Raha manomboka [manakorontana] ny kalitaon'ny fiainanao ireo soritr'aretina ireo dia tena mila miresaka amin'ny dokoteranao ianao amin'izany.
Safidy fitsaboana Perimenopause
Ny fitsaboana atolotry ny dokoteranao dia miankina amin'ny soritr'aretina izay manahirana anao indrindra, hoy i Sally Rafie, Pharm.D., Mpanorina ny Mpitsabo aretin-piterahana .
Vehivavy sasany, ohatra, tolona indrindra amin'ny tselatra mafana sy hatsembohana amin'ny alina. Amin'ireto tranga ireto, pilina na fofona fanabeazana aizana fatra ambany, na karazana fitsaboana hormonina hafa (iray izay manome ny estrogen eo an-toerana), toy ny peratra fivaviana, gel misy loha-hevitra na tsofoka — toy ny estradiol - dia ny fenitra volamena. Ny fitsaboana hormonina dia mety tsy ho voaro amin'ny olon-drehetra ary tokony hiady hevitra momba ny loza mety hitranga amin'ny mpamatsy anao ianao raha manana:
Tantaran'i aretim-po na antony mampidi-doza, toy ny kolesterola avo
Fianakaviana na tantaram-piainan'ny homamiadan'ny nono
Triglycerides avo lenta, karazana tavy ao amin'ny ranao
Tantaram-pianakaviana voan'ny aretin-tseranana
Tantaran'i tapaka lalan-dra na lalan-dra
Afaka mahita ny lisitry ny fitsaboana hormonina ekena ianao Eto .
Ny safidy hafa dia misy antidepressants — toy ny mpampitohy serotonine fividianana fatra ambany (SSRI) - ho an'ny vehivavy tsy mamaly ny fitsaboana hormonina. Gabapentin , fanafody mahazatra ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fikolokoloana, dia safidy mety ho an'ireo vehivavy tsy afaka mampiasa estrogen noho ny toe-pahasalamana hafa (toy ny migraine), hoy ny Dr. Rafie.
Mifandraika: Ny pilina fitsaboana tsara indrindra ho anao
Fitsaboana any ivelany
RAHA fahamainan'ny fivaviana ary / na fanaintainana mandritra ny firaisana dia ny fanahiana voalohany, ny fitsaboana tsy hormonina ao an-toerana toy ny moisturizer fivaviana sy ny menaka manitra, dia toerana tsara hanombohana, hoy ny Dr. Rafie. Ohatra amin'izany ny Replens sy Astroglide, izay hita amin'ny takelaka.
Ary raha ny zava-drehetra manelingelina anao ve? Eny, azonao atao ny mampiasa ireo fitsaboana ireo miaraka. Ny vokany dia kely na tsy misy. Na izany aza, raha misafidy ny mihinana pilina fanabeazana aizana fatra ambany ianao dia azo atao tanteraka izany ary tsy ho fantatrao akory fa mitranga ny perimenopause.
Heveriko fa ny vehivavy dia tokony hahatsapa fa raha mampiasa pilina fanabeazana aizana izy ireo dia mety hanarona ny soritr'aretin'ny perimenopause, hoy izy. Mety ho zavatra tsara izany, saingy [vehivavy sasany] tena te hahalala izay mitranga [amin'ny vatany].
Raha ny fitsaboana voajanahary sy raokandro (toy ny jirofo mena, cohosh mainty, na soja), namporisika ny vehivavy i Dr. Rafie mba hiresaka momba ny fampiasana fanampin-tsakafo toy izany amin'ny mpitsabo azy ireo satria a) mifangaro ny data ary b) ny indostria dia tsy fehezin'ny fitantanan-draharahan'ny sakafo sy zava-mahadomelina, midika izany fa ny fiarovana sy ny fahombiazana dia mbola tsy voaporofo. Araka ny filazan'ny National Institutes of Health Office of diet Supplement, dia nisy fanadihadiana sasany nanondro izany cohosh mainty, manokana, dia mety hanimba ny fahita matetika sy ny hamafin'ny tselatra mafana .
Miaraka amin'ny [fitsaboana hafa] dia fanadihadiana mandrakariva ny risika / tombontsoa izay tokony hijeren'ny tsirairay ny olona tsirairay, miaraka amin'ny fanampian'ny mpitsabo azy ireo [alohan'ny hampiasana azy], hoy ny Dr. Rafie.
Ny fanovana fomba fiaina tsotra dia mety hahasoa ihany koa. Dr. Minkin dia mamporisika ny fitafiana amin'ny sosona mba hanamaivanana ny tsy fahasalaman'ny soritr'aretina vasomotor toy ny fikotrokotroka sy hatsembohana amin'ny alina. Manolotra soso-kevitra ihany koa izy ny amin'ny fandinihana ireo mety hiteraka. Ohatra, ny vehivavy sasany dia mahita fa ny divay mena sy / na ny sakafo masiaka dia mampitombo ny fahita matetika sy ny faharetan'ny tselatra mafana, noho izany dia manafoana (na mampihena ny fihinanana) ireo entana ireo avy amin'ny sakafony izy ireo, hoy izy.
Dr. Minkin dia manantitrantitra ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fihazonana lanjan'ny vatana salama mandritra ny perimenopause sy ny sisa satria ny lanjany be loatra dia fanoherana ny olana ara-pahasalamana iray manontolo.
Ny fihinanana sakafo sy ny fanatanjahan-tena tsara dia [hanampy], tsy misy resaka momba azy, hoy izy, ary nanampy fa mahazatra ny vehivavy mahazo 5 5 pounds eo ho eo mandritra ny vanim-potoana perimenopause — na dia misakafo ara-pahasalamana sy manao fanatanjahan-tena betsaka aza ianao. amin'ireo fanovana hormonina ireo.
Afaka bevohoka ve ny vehivavy mandritra ny perimenopause?
Na dia tsy mila na te-hihinana pilina fanabeazana aizana fatra ambany aza ianao mba hanampy amin'ny tselatra mafana, dia mety hisy tombony lehibe iray amin'ny fampiasana azy ireo mandritra ny perimenopause - fanabeazana aizana. Satria, eny, ianao afaka bevohoka mandritra ny perimenopause .
Miverina amin'ny tsingerin'ny fadimbolana tsy ampoizina izay mitranga mandritra io fotoana io, hoy izy. Raha atao teny hafa, dia mety tsy fantatrao tsara hoe oviana, na raha, ovulate ianao . Ny kalitaon'ny atody, ary noho izany ny tsy fetezana ho bevohoka, dia mihena, mazava ho azy ( latsaky ny 5% ny vintana hoy ny American Society for Reproductive Medicine ) —Fa mitoetra ny fahafaha-manao.
Azo antoka fa tsy dia matavy loatra ny olona raha mbola 22 taona, nefa mbola miteraka ihany mandra-pahatongany any amin'io taona majika io nefa tsy misy fe-potoana, hoy ny fanazavan'i Dr. Minkin.
Ary raha tsy natao ho anao ny fanabeazana aizana am-bava? Tsy maninona. Aza hadino fotsiny ny mampiasa karazana fanabeazana aizana . Izaho manokana dia efa nanatitra zaza telo tamin'ny vehivavy 47 taona, hoy ny Dr. Minkin.
Azoko atao ve ny mampiasa karatra fitehirizana dokotera ho an'ny fanafody over-the-counter (OTC)?
Te hihena? Superfood 5 hanampiana ny sakafonao anio
zavatra mety hahatonga anao tsy hahomby amin'ny fitsapana zava-mahadomelina
inona no ampiasaina ny cephalexin 500 mg?
inona ny fanafody ao amin'ny lisitra walmart 4?
inona ny karazana syrup kohaka mahatonga anao ho avo
azo antoka ve ny maka melatonin 2
afaka misotro toaka ve ianao raha mandray az pack